रूपान्तरणको बाधक भ्रष्टाचार- विचार - कान्तिपुर समाचार
असार २४, २०७६ टीकाराम भट्टराई
अख्तियारको सक्रियता र प्रवृत्ति
केही महिनाअघि सरकारको निर्देशनमा प्रायः सरकारी कार्यालयमा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र हुन पनि दिन्नँ’ भन्ने भनाइ ठूलठूला अक्षरमा लेखेर राखिएको छ । तर पनि भ्रष्टाचार दिन दुई गुणा रात चार गुणा बढिरहेको छ । आजकल प्रायः दिनहुँ कसै न कसैलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका समाचार प्रकाशित हुने गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको यो सक्रियताले उसले संवैधानिक दायित्व पूरा गरेको सन्देश प्रवाह पनि भैरहेको छ। तर आजकल अख्तियारप्रति जनमानसमा एउटा जिज्ञासा छ । के अख्तियारको आँखाले खरदार, सुब्बा, कार्यालय सहयोगी वा वडाध्यक्ष, शिक्षक वा गाउँपालिकाका प्राविधिक र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मात्रै भ्रष्ट देख्छ ? विगत ६ महिनायता अख्तियारले चलाएका मुद्दाको विवरण हेर्ने हो भने केवल काम तामेल गर्ने जिम्मेवारी पाएका तल्ला तहका कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचारमा बढी जिम्मेवार बनाइएको देखिन्छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्नका लागि नीतिगत निर्णय गर्ने, योजना बनाउने र ठूलठूलो रकम चलखेल गर्ने प्रकृतिको पदमा आसीन व्यक्तिहरूउपर छानबिन गरे पनि विरलै रूपमा मुद्दा चलाएको देखिन्छ । मुद्दा चलाउने यो प्रवृत्तिले दुइटा प्रश्न उब्जाएको छ । एक– के सरकारको उपल्लो तह वा नीतिगत तहमा भ्रष्टाचार कम हुँदै गएको परिणामस्वरूप यस्तो भएको हो ? यदि हो भने सुशासन कायम गर्ने दिशामा यो शुभ समाचार नै हो । तर यो तथ्यलाई स्थापित गर्न वा स्वीकार गर्न जनमानस तयार छैन । दोस्रो– यदि उपल्लो तह वा नीतिगत तहमा पनि भ्रष्टाचार छ भने त्यसमा आसीन व्यक्तिहरू अख्तियारको छानबिनमा किन पर्दैनन् ?
भ्रष्टाचारको अभियोगमा अख्तियारले हजारदेखि लाखसम्मका घुस लेनदेनका मुद्दा अधिक चलाएको देखिन्छ । यी मुद्दामा अख्तियार स्वयम्ले सेवाग्राहीलाई पैसा दिएर कर्मचारीलाई घुस खुवाउन पठाउने र पछिपछि आफ्ना कर्मचारी र क्यामेरा पठाएर सप्रमाण समातेको समाचार प्रकाशित गर्ने गरेको छ । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही हदसम्म सहयोग पनि भएकै छ, तर स्वयम् सरकारी पैसा दिएर अपराध गर्न पठाउनु कानुनको शासन भएको मुलुकमा शोभनीय होइन। अर्कोतर्फ, बढुवा हुने मुखमा पुगेका कर्मचारीलाई प्रतिस्पर्धी कर्मचारीले फसाउन वा अन्य लेनदेन वा रिसइबी साध्न अख्तियार समेतको सहयोगमा यो हतियारको राम्ररी प्रयोग भएको पनि देखिएको छ ।
कानुनले घुस खाने र खुवाउने दुवैलाई भ्रष्टाचारको परिभाषामा पारेकाले अख्तियारले घुस खुवाउन पठाएको चाहिँ भ्रष्टाचार हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न पनि त्यति नै बलशाली छ । यसरी अख्तियारले नै घुस रकम दिएर पठाउने कार्य विधायिकी कानुनद्वारा अख्तियारलाई प्राप्त अधिकार पनि होइन । विधिशास्त्रीय रूपमा कुनै पनि कार्यलाई अपराधीकरण गर्नका लागि विधायिकी कानुन नै आवश्यक पर्छ । यसको पनि समयक्रममा व्याख्या होला । तर त्यसरी सप्रमाण घुस खाने भनिएका कर्मचारी पनि किन खरदार, सुब्बा वा बढीमा तेस्रो श्रेणीका अधिकृत मात्रै हुन्छन् ? यी यस्ता प्रश्न हुन्, जसले समग्र अख्तियारको कार्यशैली र प्रवृत्तिलाई शंकाको घेरामा पारेका छन् ।
सवाल अख्तियारको मात्र होइन
अख्तियार धेरथोर सक्रिय देखिए पनि प्रायः संवैधानिक अंगको प्रभावकारिता र निष्पक्षताबार प्रश्न उठेको छ । स्वयम् न्यायालय पनि अब आस्था र विश्वासको केन्द्रका रूपमा छ कि छैन ? भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि समग्र संवैधानिक अंग र राज्य संयन्त्रकै आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । दुईतिहाइ जनमतप्राप्त सरकारले समेत संवैधानिक अंगको आमूल परिवर्तनको हिम्मत नगर्ने हो भने सामाजिक रूपान्तरणको मुद्दा बेवारिसे बन्ने निश्चित छ ।
झट्ट हेर्दा संवैधानिक अंगहरू आज निजामती वा प्रहरी वा अन्य सरकारी सेवाबाट निवृत्त भएका पूर्वशासक वा प्रशासकहरूको विश्रामस्थल वा पूर्वप्रशासक क्लबजस्ता देखिन्छन् । संवैधानिक अंगहरूमा भएका नियुक्ति हेर्दा आयोगका प्रमुख वा अन्य अधिकांश सदस्यपूर्वराष्ट्रसेवकबाटै नियुक्ति गरिएका छन् । निश्चय नै पूर्वप्रशासक अनुभव र विज्ञताका दृष्टिले अरूभन्दा सक्षम ठहरिन पनि सक्छन् । उनीहरूको योग्यता, अनुभव र विज्ञतामा ठाडै प्रश्न गर्नु अनुचितै हुन्छ, तर के संविधानले संवैधानिक अंगहरूमा पूर्वप्रशासकलाई नै राख्ने परिकल्पना गरेको हो ? गम्भीर विमर्श जरुरी छ । संवैधानिक अंगमा पद रिक्त हुनेबित्तिकै पूर्वप्रशासकहरू सत्ताधारी र विपक्षी दलको नेताको ढोका चहार्न थालिहाल्ने वा पदमा रहँदै दलका नेतालाई रिझाएर भविष्यको पद सुरक्षित गर्ने जुन परिपाटी देखिएको छ, यसले गम्भीर नीतिगत, प्रशासनिक र संवैधानिक प्रश्नहरू उब्जाइदिएको छ । नियुक्तिको यो प्रवृत्ति कायमै रहे नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ती अंग सक्षम रहनेछैनन् । अपवादस्वरूप संवैधानिक अंगहरूमा पूर्वप्रशासक ल्याउनुलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन । हाम्रोमा अपवाद चाहिँ नियमितजस्तो र नियमित चाहिँ अपवादजस्तो हुने गरी प्रायः संवैधानिक अंग पूर्वप्रशासकहरूले भरिभराउ भएका छन् ।
यसकारण गलत छ, यो प्रवृत्ति
संविधानले संवैधानिक अंगलाई स्वायत्त ढंगले काम गरून् भन्ने उद्देश्यले कार्यपालिकाको दबाब, प्रभाव र त्रासबाट मुक्त राखेको छ । महाअभियोगबाहेक संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न सकिन्न । तर कार्यपालिकाको आज्ञापालक भएर सेवानिवृत्त भएका व्यक्तिहरू कार्यपालिकाको दबाब र प्रभावबाट कति स्वतन्त्र हुन सक्छन् ?
जीवनभर हाकिम, प्रशासक र मन्त्रीलाई रिझाएर बसेका प्रशासकबाट संवैधानिक इच्छा बमोजिम ती संस्थालाई स्वतन्त्र राख्न कति सम्भव हुन्छ ? सेवावधिभर माथिकालाई रिझाउने प्रवृत्तिबाट दीक्षित र जिन्दगीको ऊर्जाशील समय यो प्रवृत्तिबाट हुर्केपछि उनीहरूको सिर्जनशीलता, क्रियाशीलता र रचनात्मकता अपवादबाहेक करिब–करिब अन्त्य भएको हुन्छ । संवैधानिक अंगको प्रमुख वा सदस्यको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको आश्वासन वा दबाब वा त्रासको वास्ता नगरी केवल संवैधानिक दायित्व मात्र पूरा गर्नुपर्ने प्रकृतिको हुन्छ । आज जसरी संवैधानिक अंगहरूमा पूर्वप्रशासकलाई भटाभट नियुक्त गरिएको छ, यसबाट ती कार्यपालिका वा राजनीतिक नेतृत्वको आज्ञापालक मात्र हुने हुन् कि भन्ने खतरा उब्जेको छ ।
संवैधानिक अंगमा रहने पदाधिकारीहरू प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा नेताकै कार्यसम्पादनको पुनरावलोकन गरेर आवश्यकता अनुसार तिनलाई कारबाही गर्ने, निर्देशन दिने वा मुद्दा चलाउने निर्णय गर्नसक्ने क्षमताको हुनु अनिवार्य छ । अर्कोतर्फ, सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकलाई राज्यले अब तिम्रो सेवा अवधि समाप्त भयो भनेर बिदा मात्र गरेको हुँदैन, उसले जम्मा गरेको रकममा शतप्रतिशत थप गरेर सञ्चयकोष अनि आजीवन पेन्सनसमेत दिने गरेको हुन्छ । यसको सीधा अर्थ हो— उसलाई राजकीय कामबाट राज्यले औपचारिक रूपमा बिदा गरेको हो । अनि त्यही मानिसलाई पुनः संवैधानिक अंगमा वा राजदूत वा अन्य राजकीय सेवामा नियुक्त गर्नुको औचित्य, तर्क र आधार दिनुपर्छ कि पर्दैन ?
संवैधानिक अंगलाई क्रियाशील र प्रभावकारी बनाउने क्षमता र योग्यता भएको अथाह जनशक्ति अहिले बजारमा उपलब्ध छ । देश–विदेश पढेका, अनुसन्धान गरेका अनि अनुभवसमेत हासिल गरेका सबै विधाका योग्य जनशक्ति बजारमा प्रशस्त भएको अवस्थामा उनीहरूको योग्यता, सीप, ज्ञान र अनुभवलाई दोहन गर्न पनि संवैधानिक अंगहरूमा फ्रेस जनशक्तिको नियुक्ति गरिनुपर्छ । पूर्वप्रशासकलाई आवश्यकताका आधारमा ती अंगले काम लगाउन सक्छन् वा विशेषज्ञका रूपमा सेवा लिन सक्छन् । तर उनीहरूलाई नै नियुक्तिको पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने विद्यमान प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नैपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँगै सबै क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि संवैधानिक अंगहरूको आमूल परिवर्तनतर्फ सरकार र राजनीतिक दलहरूको ध्यान जानु जरुरी छ ।
प्रकाशित : असार २४, २०७६ ०९:३९